I-Kuusi Cabin e-KATVE Nature Retreat eduze kwase-Helsinki - I-Airbnb
I-Kuusi Cabin e-KATVE Nature Retreat eduze kwase-Helsinki
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Auli
U-Auli Ungumbungazi ovelele
Ebangeni elingamakhilomitha angu-40 ukusuka e-Helsinki, i-Katve Nature Retreat iyindawo yethu yokucasha yomndeni ezungezwe imvelo ehlanzekile nenokuthula futhi isogwini lwechibi elihle elinamanzi ahlanzekile. Futhi sitholakala kumakhilomitha ambalwa ukusuka olwandle kanye neqoqo leziqhingi elinamathuba amahle okuqwala izintaba nokugwedla.
I-Kuusi Cabin ingelinye lamakhabethe ethu angu-4 athokomele (amakhabhini amabili anamathelene) ngalinye linesauna yangasese. Eduze kwechibi uzothola indawo yokucima umlilo yangaphandle kanye nekhishi lasehlobo elilungele ukupheka emlilweni futhi ujabulele ukushona kwelanga.
Izivakashi zethu zingajabulela zonke izinjabulo ozilindele ekhaya. Kukhona ikhishi elihlome ngokuphelele elinetafula lokudlela elikhulu nazo zonke izidingo, igumbi lokuhlala elikhulu elinosofa nendawo yomlilo, amagumbi okugeza amabili (elinye linendlu yangasese nosinki elinye elineshawa nesauna yangasese), amagumbi okulala amabili. enemibhede ephindwe kabili, phezulu kunendawo enkulu enombhede owodwa owengeziwe. Ikhabethe liyingxenye yendlu eqhelile okusho ukuthi kunamakhabethe amabili ahlukene ngokuphelele endlini eyodwa. Ikhabethe liza nombono omangalisayo wemvelo ezungezile kanye nechibi!
Indawo ezungezile kanye negceke elikhulu (okwabelwana ngalo nezinye izivakashi) kuyingxenye esiyintandokazi yendawo! Khona kanye ngaphandle komnyango uzothola u-400m wogu lolwandle echibini lamanzi ahlanzekile elilungele ukuthatha i-dip uqonde ku-sauna, indawo yomlilo yangaphandle ukuze uphumule noma upheke, indawo yokushisa yamalahle ozoyisebenzisa, kanye nezindlu zokulala phakathi kwezihlahla. Futhi ithuba lokubamba iqhaza kwi-windsurf noma isifundo sokugwedla esigijima ngezikhathi ezithile kuma-TwentyKnots.
Thina ngokwethu siyamangala usuku nosuku ukuthi ngenkathi useduze ne-Helsinki, uhlukaniswe ngokuphelele nanoma yikuphi ukuhlupheka kwedolobha futhi uphakathi kwemvelo ehlanzekile nenokuthula. Ekuseni okuningi, ngokwesibonelo ungase ubone inyamazane ngaphandle kwefasitela legumbi lakho lokuphumula.
Ichibi lamanzi ahlanzekile ahlanzekile lilungele ukubhukuda, ukudoba, ukugwedla, ukuma-up-paddling njll. Amahlathi aseduze akulungele ukuhamba ngezinyawo, ukugijima umzila, ukuhamba ngebhayisikili, ukuzindla noma ukukha amajikijolo namakhowe. I-cabin nayo ingama-approx nje. 2.5km kude nolwandle kanye neqoqo leziqhingi lapho uzothola khona ibhuloho eliya esiqhingini esikhulu esihle esinamathuba amahle okuqwala izintaba esinendawo yeziqhingi.
Endleleni eya endaweni yethu umgwaqo udlula endaweni enhle yasemaphandleni kanye ne-approx. 5km ngaphambi kokuthi uthole isitolo esihle sabalimi abancane kanye nekhefi evuliwe ngezimpelaviki ngemikhiqizo yemvelo ekhiqizwe endaweni. Ukuhamba ngemizuzu eyi-10 ukuya edolobheni eliseduze iKirkkonummi kuzokunikeza yonke into oyidingayo ngezitolo ezinkulu zegrosa njll.
Kukhona futhi isitebele sokugibela endaweni esihlinzeka ngezifundo zokugibela izwe kanye nesikole. Uma uthanda izinto zamanzi, i-TwentyKnots ikunikeza izifundo zokuntweza emoyeni ngokucela echibini kanye nohambo lokugwedla lokuma phezulu eqhingini leziqhingi. Kungenzeka futhi ukubhuka ama-pilates angasese noma izifundo ze-yoga emhlabeni noma kumabhodi okugwedla. Cishe. Amakhilomitha angu-4 ukusuka lapho uzothola i-Rehndahl, ipulazi elincane lezilwane ezifuywayo elivulekele izivakashi ukuhlangabezana nezimvu, amahhashi, izimbuzi, ama-lamas kanye nama-falabellas (amahhashi amancane kakhulu emhlabeni).
Amahlathi azungezile yikhaya lama-elk, i-moose, inyamazane, impungushe kanye ne-bob cat. Futhi iyindawo yokuzalela izinhlobo eziningi zezinyoni; ukhozi olunomsila omhlophe, i-gray heron, i-swan, i-osprey. Kusihlwa ungezwa umtshuzi onamaphimbo amnyama kanye no-crane becula echibini.
Uhambo oluhle losuku olusuka e-Katve yila: Isiqhingi sase-Linlo esiqhele ngamakhilomitha ambalwa nje sinezindawo zomlilo wekamu kanye nemibono emihle yokuvula ulwandle futhi i-Porkkala, i-Kopparnäs kanye nenhlonhlo yase-Porkkala kufanelekile ukuvakashela eduze futhi isifunda sase-Meiko sinikeza indawo enhle yokuhamba emini.
Elinye lamakhabethe amane e-Katve, lisetshenziswa thina. Ngezinye izikhathi siphinde sigijime i-windsurf futhi sisukume izifundo zokugwedla emagcekeni ngokusebenzisa i-windsurf yethu futhi sisukume isikole sokugwedla i-TwentyKnots. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi uzoba nokuhlala okuzolile nokunokuthula futhi sikuvumele ujabulele ubumfihlo kodwa ngesikhathi esifanayo uma udinga noma yiluphi usizo noma amathiphu anoma yini sihlala sikujabulele ukukusiza :).
Elinye lamakhabethe amane e-Katve, lisetshenziswa thina. Ngezinye izikhathi siphinde sigijime i-windsurf futhi sisukume izifundo zokugwedla emagcekeni ngokusebenzisa i-windsurf yet…
UAuli Ungumbungazi ovelele